कर्मचारीको इमानले बनेको कर्म-मन्दिर शिक्षा . समाचार३१ जेठ २०७७
एयरलाइन्सको जागिर छोडेर बाख्रापालन र कृषि फार्ममा व्यस्त प्रदीप गिरी गिरीले कृषि फार्म र मासु उत्पादन बिक्री केन्द्रमा करिब ३५ जनालाई रोजगारी दिएको जानकारी दिए । मासिक सबै खर्च कटाएर १ लाख ५० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । शिक्षा . समाचार२६ असार २०७७
ढलमा कोरोना भाइरस अनुसन्धान विवाद: अनुमति नलिई अनुसन्धान कोरोना भाइरस परीक्षणको लागि सरकारले केही निजी प्रयोगशालालाई पनि अनुमति दिएको छ । तर, सेन्टर फर मलिकुलर डायनामिक्सलाई सरकारले अनुमति दिएको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यो संस्थाले एप्लाइ नै गरेको छैन शिक्षा . समाचार२१ असार २०७७
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तयार गरिँदै (फोटो फिचर) भोटोजात्रा सकिएपछि मच्छिन्द्रनाथलाई प्राचीन कलात्मक खटमा राखेर सांस्कृतिक बाजागाजासहित जावलाखेलबाट बुङ्मतीको मन्दिरमा ६ महिनाका लागि विराजमान गराउन लैजाने परम्परा छ शिक्षा . समाचार१७ असार २०७७
टेम्पोचालककाे प्रश्न : आधा पेट खाएर कति दिन बाँच्नु सरकार ? सरकारले गत १४ जेठदेखि ३ महिनादेखि गर्दै आएको लकडाउन खुकुलो गर्न भने पनि सार्वजनिक गाडीलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छैन शिक्षा . समाचार१७ असार २०७७
गिरिजाले राजनीतिमा ल्याए, माओवादीले विधवा बनाए तत्कालीन माओवादीले ५ असार २०५७ मा मर्निङ वाकमा निस्किएका चन्द्रनारायणलाई गोली हानेर हत्या गर्‍यो । मर्निङ वाकमा निस्किएका चन्द्रनारायण कहिल्यै घर नफर्किने गरी अस्ताए सँगै उनका सपना पनि खरानी भए शिक्षा . समाचार१३ असार २०७७
७ वर्ष दास, फर्कने बेला रित्तो हात खाडीमा घरेलु रोजगारीका लागि गएका नेपाली महिलासँग साहुको शरीर सम्बन्ध मात्र हुन्छ । साहुहरूको यौन सम्बन्धसँग मात्र मतलब हुन्छ अरू कुराको मतलब हुँदैन शिक्षा . समाचार११ असार २०७७
कतै करेन्टले मारिए, कतै बञ्चरो हान्ने धम्की कोरोना भाइरसको त्रासले सामाजिक एकता र सद्भावको वातावरणमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ, जुन अत्यन्तै चिन्तातुर विषय हो । कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थला त पार्‍यो नै, समाजसमेत भाँडिदिएको छ शिक्षा . समाचार१० असार २०७७
अभिभावकत्व दिने संस्थाले नै पाएन अभिभावकत्व टिनको छानो र ब्लकबाट बनेको आश्रममा स्वेच्छिक दानबाहेक अन्य कुनै पक्षबाट सहयोग भने भएको छैन । आश्रमको अभिभावत्व स्थानीय तहले लिनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको आश्रमका अध्यक्ष डोलबहादुर रामदाम बताउँछन् शिक्षा . समाचार८ असार २०७७
टुँडालका यौन आसन (फाेटाे कथा) मन्दिरमा कुँदिएका यी आकृतिलाई वात्सायनको कामसूत्रसँग दाँजेर पनि हेर्ने गरिएको छ । यी टुँडालहरूमा कुँदिएका आकृति कामसूत्रले उल्लेख गरेका यौनासनहरू थिए भन्ने पनि केही विद्वानहरूको मत रहँदै आएको छ शिक्षा . समाचार४ असार २०७७
कागजमा ३० किलो चामल, दिइयो ७ किलो मात्रै बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका हलिया, गरिब, असहाय र श्रमिकलाई कोभिड–१९ को राहत वितरण गर्दा केसम्म गरिएन ? ३० किलो चामलमा हस्ताक्षर गराएर दिइयो ७ किलो मात्रै । आश्चर्यको विषय यस्तो नक्कली काममा नगरपालिका संस्थागत रूपमा संलग्न छ शिक्षा . समाचार४ असार २०७७
सरकार भन्छ : श्रमिकले साढे २ अर्ब लगे, जिफन्टको दाबी : ९० प्रतिशत राहतविहीन अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कस्ता र कुन क्षेत्रका श्रमिकले साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरकाे राहत पाए ? सरकारले यो विषयमा प्रस्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ । सरकारले राहत बाँडेका श्रमिक र ट्रेड युनियनका श्रमिक फरक छन् कि, यस विषयमा हामीले पनि बुझिरहेका छौँ' शिक्षा . समाचार३ असार २०७७
पशुपति सरसफाइका लागि भारतद्वारा ३ करोड ७२ लाख सहयोग पशुपति क्षेत्र मन्दिर परिसरमा सरसफाइ सुविधा निर्माणका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शिक्षा . समाचार१ असार २०७७
विदेशिनेका दु:ख- गाली गर्दै गए, स्वर्ग भन्दै आए अध्ययनका सिलासिलामा बंगलादेश पुगेका नेपाली संकटको बेला आफ्नो देशको यादले सताउने मीठो अनुभव बोकेर फर्किएको बताउँछन् । सबैको एकैखाले अनुभव छ– नेपाल फर्किएपछि कोरोनाको मानसिक तनाव नै हरायो शिक्षा . समाचार१ असार २०७७
कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र नागरिककाे उद्धारका नाममा व्यापार रोजगारीका लागि आएका कतिपय कामदार हवाइ खर्च तिरेर फर्कन सक्ने अवस्थामा नभएको विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराइरहेको पाइएको छ । कतिपय देशबाट स्वदेश फर्कनुपर्ने कामदारसँग खान र बस्न समस्या भइरहेका बेला आफुै पैशा तिरेर फर्कन नसक्ने दूतावासहरुले बताइरहेका छन् । शिक्षा . समाचार१ असार २०७७
कुवेतमा नेपाली महिला कामदारकाे नारकीय जीवन कुवेतमा कतिपय महिला जिउँदो लास भएर काम गरिरहेको रायले बताइन् । कुवेतका मुख्य शहरमा धेरै जब सेन्टर छन् । ती जब सेन्टरमा नेपाली महिलालाई रोजगारीका लागि पुर्‍याइन्छ । त्यहाँबाट निश्चित रकममा घरेलु कामका लागि बेचिने गरेको छ शिक्षा . समाचार८ घण्टा
कतारका रंगशालामा कार्यरत नेपाली ७ महिनादेखि तलबविहीन सुनसरी इनरुवाका दिलिपकुमार झा (नाम परिवर्तन) १४ महिनाअघि रोजगारीका लागि कतार पुगेका थिए । कोशी इन्टरनेशनल म्यानपावरमार्फत् कतार पुगेका उनी अहिले कतारको निमार्णाधिन रंगशालामा कार्यरत रहेको बताउँछन् । दिलिपले ५ महिनादेखि काम गरेको तलब पाएका छैनन् । शिक्षा . समाचार३० जेठ २०७७
भाडा विवादका कारण राेकियाे विदेशमा अलपत्र नागरिककाे उद्धार परराष्ट्र मन्त्रालयले २ साताभित्र दैनिक ३ हजारका दरले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिककाे उद्धार गर्नुपर्ने सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको २ हप्ता नाघ्दा हालसम्म २ सय २ जनाकाे मात्र उद्धार भएकाे पाइएकाे छ शिक्षा . समाचार२८ जेठ २०७७